Ndeupi mutsauko uripo pakati peecommerce nemusika? | ECommerce nhau
Ndeupi mutsauko uripo pakati peecommerce nemusika?
Vanhu vazhinji vanotenda kuti pamusika pamhepo uye e-commerce mapuratifomu anogona kuve akafanana chinhu. Ichokwadi kuti ese ari maviri anoshandiswa pamabhizimusi epamhepo zvinangwa, asi pane musiyano wakakosha pakati pawo. Iyo e-commerce webhusaiti haina chimwe chinhu kunze kweyechete mutengesi webhu chitoro, nepo kune rumwe rutivi musika wepuratifomu unoshandiswa nekambani imwechete nerubatsiro rwemupiro wevatengesi vakawanda. Heano mashanu akakosha mutsauko pakati peMusika neElectronic Commerce iwe yaunofanirwa kuziva:
Mukati meizvo chaizvo nzira dzakasiyana dzeetekinoroji zvinofanirwa kusimbisa kuti emagetsi commerce showcases aripo ekupa huvepo hwekutengesa online uye saka zvakagadzirirwa izvozvo. Dzinorongedzwa nekuda kwechinangwa icho. Kune rimwe divi, misika inopa vatengi chitoro chimwe chete kuti vatenge zvese zvavanoda. Iyo tekinoroji yakakodzera yekugadzirisa musika chikuva yakanyanya kuomarara. Semuenzaniso, mapuratifomu emusika wemazuva ano anotsigira kuwanda kwakawanda kweAPI nezvitoro zvepamhepo nepamhepo, zvakare.
Izvi ndizvo zvinodaidzwa kuti zvinotyisa modhi kusvika pane manejimendi modhi. Kunyangwe musika usinga tenge chero zvigadzirwa, iwe unotora yakanyanya kushomeka njodzi yemari pane echinyakare e-commerce mawebhusaiti ayo anofanirwa kugara achiisa mari mumatanda asingatombo tengesa. Nenzira iyi, Misika inowana hupfumi hwechiyero zviri nyore, uye nekudaro ichivatendera kuti vawedzere nekukurumidza kupfuura e-commerce mawebhusaiti. Misika zviri pachena kuti zvakaoma kuvaka, asi zvinogona kuve zvinogara kwenguva refu uye zvinobatsira kana vangosvika pamari.
1 Kuti unzwisise pamusika
2 Kushambadzira uye kunongedza nzira
3 Zvimwe zvinhu mukusiyana kwavo
4 Chii chiri musika?
Kuti unzwisise pamusika
Kunyangwe iwe uri bhizinesi idzva kana wave nebhizinesi kwemakore akati wandei, tora zvimwe ecommerce kutengesa. Iko vanhu vazhinji vanofungidzira kuti pamusika pamhepo uye e-commerce mawebhusaiti anogona kuve zvakafanana chinhu.
Kunyangwe zvese zviri zviviri zvichishandiswa pamabhizimusi epamhepo zvinangwa, pane mamwe misiyano yakakosha pakati pawo. Semuenzaniso, pamusika ipuratifomu yepamhepo apo muridzi webhusaiti anotendera vatatu-vevatengesi kutengesa papuratifomu uye invoice vatengi zvakananga, zvichireva kuti vatengesi vazhinji vanogona kushambadzira zvigadzirwa zvavo kune vatengi. Muridzi wepamusika haasi iye muridzi wezvinhu, uye iye haapi invoice kumutengi. Muchokwadi, ipuratifomu yevatengesi nevatengi, zvakafanana nezvinoonekwa mumusika chaiwo.
Mukupesana, e-commerce webhusaiti chitoro chimwe-chepamhepo kana chitoro chepamhepo pamhepo apo imwe mhando inotengesa zvigadzirwa zvayo pawebhusaiti yayo. Iko kuverenga ndiyo yega nzvimbo yemuridzi webhusaiti. Muridzi webhusaiti anobhadharisawo mutengi uye anobhadhara kukosha kwakawedzerwa mutero. Iko hakuna sarudzo yekunyoresa semutengesi, zvakafanana nezvaunoona muchitoro chekutengesa. Uye zvinoenderana nevatengi. E-commerce webhusaiti inonzi zvakare imwechete mutengesi webhusaiti uko muridzi wechitoro anogona kushandisa webhusaiti yekutengesa zvinhu.
Mune mamwe mazwi, musika unogona kunge uri e-commerce webhusaiti, asi kwete ese e-commerce mawebhusaiti ari misika. Kunyangwe zvinganzwika sekuvhiringidza, heano gumi akakosha misiyano pakati pemusika uye webhusaiti yeecommerce iwe yaunofanirwa kuziva nezvayo.
Muchokwadi, iyo yakanakisa nzvimbo yekutengesa online inosiyana kubva kumutengesi kune mutengesi zvichienderana nezvako zvigadzirwa, zvido, uye zvinangwa.
Heano gumi misiyano pakati peMusika neElectronic Commerce yaunofanirwa kuziva.
Kushambadzira uye kunongedza nzira
Izvo zvakakosha kuti uve nepfungwa yakajeka nezve yako nzira yekutengesa uye kutarisisa mumusika wepamhepo uye e-commerce bhizinesi. Paunenge uri mue-commerce iwe unofanirwa kutarisa kune vanotenga vatengi, mumusika iwe unofanirwa kukwezva kwete vatengi chete asiwo vatengesi vanozove moyo wepuratifomu yako. Mune e-commerce, mumwe mutengesi anofanira kushandisa yakawanda kutyaira traffic kune yavo saiti.
Kana mutengi awana kwavo kusarudzwa, maitiro ekusarudza ari nyore sezvo ivo vari kusarudza kubva kune zvigadzirwa zvinopihwa neimwe kambani. Kune rimwe divi, misika inobatsira kubva kune vakawanda vashandisi vanotengesa pane yavo saiti. Sezvo paine vatengesi vazhinji, ivo vega vanoshambadzira kuvapo kwemusika, zvichikonzera kupararira kwehutachiona hwekuziva. Vatengi vanofara, pavanenge vachiita saiti, ndipo pavanonyanya kubatsira kuparadzira kuzivikanwa kwemusika.
Musika hautengese kana kutenga chero zvigadzirwa. Saka iwe unotora yakanyanya kushomeka njodzi yemari pane e-commerce mawebhusaiti ayo anofanirwa kugara achiisa mari mumatokisi ayo anogona kutora nguva kutengesa kana kusatombotengesa. Sezvambotaurwa, misika inowana hupfumi hwechiyero zviri nyore uye nekudaro inobvumira kukurumidza kukurumidza kupfuura e-commerce mawebhusaiti.
Kana traffic ichikura nekukasira, zvinogona kuve zvakakosha kutsvaga vatengesi vatsva kuzadzikisa kudiwa, asi haufanire kunetseka nekushandisa mari yakawanda pazvinhu zvitsva zvekuchengetera kana zvekuchengetera.
Ramba uchifunga kuti izvo zvakakura zviverengero, vatengi vanogona kuwana zvavanenge vachitsvaga. Kuumbwa kukuru kunowanzoreva kuti kuwedzera kwekuwedzera kunofanirwa kuiswa mukushambadzira kuti uwane kutarisisa kwevashanyi vako, kunyangwe kana vachifarira webhusaiti.
Pareto musimboti, unozivikanwawo semutemo we80/20, unowanzo shanda mukuvandudza misika, sezvo vashoma vezvigadzirwa zvichawedzera kune vazhinji vekutengesa. Dzimwe nguva kuchengeta hukuru hukuru mudura kunogona kukonzera matambudziko kuchengeta chimwe chinhu chingazotengesa zvirinani. Pane e-commerce mawebhusaiti, iyo Pareto musimboti inoreva kuti uchafanirwa kubvisa zvigadzirwa zvisina kutengeswa pane imwe nguva, uchideredza zvakanyanya mitengo yavo. Pane zvinopesana, mumisika, kana paine chigadzirwa chisiri kutengeswa, unogona kusarudza kuchimisa nekukanda bhatani. Sezvo usati wambotenga zvigadzirwa, hapana mari inosanganisirwa.
Kuvaka yako wega ecommerce webhusaiti kunogona kuve nyore kana kuomarara sezvaunoda. Pane nyaya dzakawanda dzakabatanidzwa mazviri. Saka pachave nenguva yakawanda uye basa kugadzira nekuchengetedza yako e-commerce webhusaiti. Asi mumusika, zvese pazvinoramba zvakagadzirira, unogona kunyoresa, kunyora nekutengesa pasina kushandisa yakawanda nguva uye rimwe basa.
Zvekare, sezvo ecommerce mawebhusaiti ane akakwira ekutanga mari, ivo vanotora nguva yakareba kuti vaputse kunyange. Kune rimwe divi, misika ine zvirinani purofiti miganho sezvo yavo mari iri chaizvo zvikamu zvekutengeserana. Zvichienderana nehuwandu hwezviitiko, iyi ndiyo mari yakawanikwa iyo inowanzo dzoreredzwa mukugadzirwa kwechigadzirwa kuti ikurumidze kukura.
Mumisika, margins pane yega yega yekutengesa yakaderera kana ichienzaniswa ne-e-commerce kutengesa. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekomisheni mari inotorwa kubva mukutengesa. Nekuda kweizvozvo, misika inoda kutengesa yakawanda yezvigadzirwa kupfuura e-commerce.
Kune zviratidziro zvinoratidza zvinoshandiswa kuitika mumisika yekutengesa. Ivo zvakare vanonongedzera kune iko kutungamira kwekufamba kwemutengo. Iine nerubatsiro rwezviratidzo zvinoitika, misika inogona kunyanya kutarisa kutengesa kwako. Ivo vanoziva zvakare kuti ndezvipi zvigadzirwa zviri zvakanakisa uye ndeapi vatengesi ndiwo anonyanya kushanda. Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kutora akanakisa uye anonyanya kushanda matanho ekutora nekusimudzira izvo zvemukati izvo zvinonyanya kukosha kune vashandisi vako.
Veruzhinji kutora chikamu kwakakosha kwazvo mubhizimusi repamhepo, kungave mumusika kana pane e-commerce webhusaiti. Masoko agara ari ekutengeserana-akatarisana uye chinangwa ndechekubatanidza vatengi nevatengesi. Masoko anowanzo tarisa zvachose pakuita kuti vatengi vatenge uye vatengesi kuti vaise zvimwe zvigadzirwa kana masevhisi. Muchokwadi, misika inobatsira kubva kunetiweki mhedzisiro: vatengi vazhinji vanokwezva vatengesi vazhinji uye zvinopesana.
Kukwezva vateereri mubhizimusi re e-commerce kwakaoma. Inguva inopedza uye inodhura. Kunyangwe mushure mekuwana rumwe ruzivo, iwe unogona kunge uchiri kunongedza vanhu vasiri ivo. Mhando dzakasiyana dzezvekudyidzana senge Facebook dzinogona kuenda nenzira yakareba mukukwezva vateereri.
Kuvaka kuvimba mune ese musika uye e-commerce zvakakosha kuti iwe ugone kutengesa online. Vashandisi vako vanofanirwa kuvimba nechikuva chako nevamwe. 67% yevatengi vanovimba kutenga mumusika unozivikanwa, kunyangwe kana vatengesi vari kutengesa chigadzirwa vasina kujaira. Kana vatengi vachinge vaine chiitiko chinogutsa, 54% inotenga mumusika mumwechete zvakare, uye kuvimba chikamu chakakosha chechiitiko ichi. Pane e-commerce webhusaiti, zvakaoma sezvo zvichitarisirwa kana kuve zvemunhu mumwechete.
Parizvino, mumusika mune huwandu hwakawanda hwezvishandiso zvekuvaka e-commerce webhusaiti uye anonyanya kuzivikanwa ari SAP Hybris, Salesforce Commerce Cloud kana Magento. Masoko anopa vatengi chitoro-chimwe chete kuti vatenge zvese zvavanoda. Naizvozvo, mhinduro dzemusika dzakagadziridzwa kubva pakutanga kuzadzisa zvido zvevatengi nevashandisi vemusika.
Izvo zvehunyanzvi zvinhu zvekuvaka musika zvinofanirwa kunge zvakasarudzika. Inofanirwa kupa maAPIs ane simba (application program interface), ive gore-based software iyo inobvumidza nguva pfupi yekumisikidza, uye iine dhatabhesi inotyisa yakagadzirirwa kushandiswa mumisika yakawanda. Mhinduro dzemusika wemazuva ano dzinoenderana neomni chiteshi tekinoroji; kufungidzira iwo chaiwo nzira dzechitoro, iyo webhu, kuzadzikiswa uye zvemagariro zvekutengeserana mune imwechete chikuva.
Kufambisa kwakaomarara zvakanyanya
Mumusika, zvigadzirwa zvakarongeka kuita seti yakarongeka nekuti inotongwa nevatengesi vanoverengeka vane yavo rondedzero yezvigadzirwa. Asi, pane e-commerce webhusaiti, kurongeka kwezvigadzirwa kunoenderana nezvikamu. Iko kune zvakadzama uye nekudaro zvinoshanda zvakanyanya mafirita ebhawa rekutsvaga, zvinoreva kuti mushandisi anogona kukwenenzvera kutsvaga kwavo zvakanyatso nyatso. Saka, maererano nemaitiro ekubhurawuza uye mapatani, pane musiyano mukuru.
Zvimwe zvinhu mukusiyana kwavo
Musika ndewe e-commerce chikuva, asi kwete ese e-commerce saiti ari misika. Saka ndoupi mutsauko uripo pakati peecommerce saiti nemusika? Heano makuru acho ekukubatsira kukutungamira parwendo rwako kuenda kumusika:
Musiyano mukuru pakati peiyo e-commerce saiti uye mhinduro yemusika
1.Kudyara kudiki, chikuva chikuru
Ecommerce webhusaiti: Kutanga webhusaiti yeecommerce kunowanzo kuda kuisa mari yakanaka mari zvisati zvaitika kukwezva vatengi nezvakawanda.
Musika: Kana zvasvika kumisika, iwe une mukana wekubvumidza vatengesi kubata masheya avo vega, izvo zvinoderedza zvakanyanya kudyara kwako kwekutanga. Misika yemisika inogona kunongedza zvimwe zvigadzirwa kupfuura ecommerce saiti sezvo iko kuunganidzwa kwechigadzirwa kunobva kune vakawanda vatengesi. Nepo mutengo wekutanga musika wakasimba wakangofanana neiyo ecommerce saiti, iko kuve nyore kwemusika kune zvakawanda.
2 hukuru hwekuverenga
ZveMusika: Nenhamba hombe mumusika, vatengi vanogona kuwana zviri nyore chigadzirwa chavari kutsvaga. Nekudaro, hombe katarogu yaizoda yakawanda kuedza mukushambadzira.
Kune iyo e-commerce webhusaiti: Pane e-commerce webhusaiti, iwe unofanirwa kubvisa zvimwe zvisina kutengeswa zvigadzirwa kana kudzikisa mitengo yavo pane imwe nguva, sezvo kuzvichengeta muchitoro kwaizokudzivirira iwe kubva pakuisa kumusoro pane chimwe chinhu chinotengesa zvakanyanya.
Mumusika, iwe unogona nyore nyore kubvisa chisina kutengeswa chigadzirwa nekudzvanya kamwe chete. Sezvo iwe usati watenga zvigadzirwa, hapana mari inosanganisirwa nazvo.
3.Kuru uye yakaoma
Musika unounza pamwechete zvigadzirwa zvigadzirwa kubva kune vakawanda vatengesi, asi zvakarongeka kuita zvakarongeka zvakarongeka, iine mamwe mareferenzi kupfuura e-commerce webhusaiti. Naizvozvo, inoda inovakwa-yakanaka yekushambadzira sisitimu uye zvinoshanda zvekusefa mafirita ayo anotendera vashandisi kunatsiridza kwavo kutsvaga zvakanyanya.
4.Positive mari kuyerera
Ecommerce: Ecommerce mawebhusaiti akaita mari dzakakwira pakutanga, mari yavo uye zviwanikwa zvinotora nguva yakareba kuti iparare.
Musika: Masoko anonakidzwa nani mhindu panjere sezvo mari inogadzirwa inoumbwa nepesenti yezvekutengeserana. Zvichienderana nehuwandu hwezviitiko, mari yakawanikwa inowanzo dzoreredzwa mukugadzirwa kwechigadzirwa kuti ikurumidze kukura.
Musika unopa akasiyana zvigadzirwa. Sevazhinji vagadziri vakasiyana vanotengesa papuratifomu imwe chete, pane zvakasiyana siyana kusarudza kubva pane zvakajairika online chitoro ine diki seti yemhando. Zvakare, misika inowanzo shandiswa nemabhizimusi madiki kutengesa zvigadzirwa zvemasekondi, saka mitengo inotarisirwa kudzikira zvakare.
Nhasi, kune akawanda mhinduro dzinoshandiswa kuvaka e-commerce mawebhusaiti anowanikwa mumusika, senge SAP Hybris, kana Magento kuve inonyanya kufarirwa. Iwo musika maitiro anogara achichinja uye kubudirira kwawo kuri kukura mazuva ese.
Chii chiri musika?
Izwi rekuti musika rinobva mukubatana kwemazwi maviri muChirungu:
Market, zvinoreva musika
Nzvimbo, inova nzvimbo.
Nekudaro, inogona kunzwisiswa senzvimbo yekutengesa, rudzi rwekuratidzira chairwo runopa zvigadzirwa kubva kumarudzi akasiyana siyana kana makambani kune vatengi.
Tichifunga nezve zvakasarudzika zvemagetsi zvemabhizimusi, uyu modhi unoshanda senzvimbo yekutengeserana yekutengeserana. Asi pane musiyano pakati pavo.
Ecommerce inogona kunzwisiswa sechitoro chaicho, chaicho cheimwe mhando kana kambani. Iyo inoshandisa iyo B2C pfungwa, iyo inonongedza zvakananga mutengi kukambani.
Nekudaro, ecommerce chingave chitoro chepamhepo chinotengesa chete zvigadzirwa zvekambani pachayo.
Asi pamusika musangano wekambani dzinoverengeka papuratifomu imwe.
Muenzaniso wakanakisa wekutsanangura iyo ndeye zvitoro zvekutengesa, asi mune chaiyo nharaunda.
Iyi modhi, pamusoro pekuisa mutengi mukubatana nezvigadzirwa kubva kuzvitoro zvakasiyana siyana, zvakare inogonesa bhizinesi pakati pemakambani anobatanidzwa, nekuti inoshandisa, pakati pevamwe, Bhizinesi kune Bhizinesi uye Bhizinesi kune Mutengi kana B2B2C.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Ndeupi mutsauko uripo pakati peecommerce nemusika?
Karina Gastiulmendi akadaro
Tsananguro dzakanaka, ndakwanisa kuwana mhinduro kubva kukambani yeMitsoftware inonzi Mit musika, kwandinogona kutengesa zvigadzirwa zvangu uye zvinonakidza nekuti ndinogona kutenga mhinduro iyi uye maficha ayo ainondipa akanaka
Pindura Karina Gastiulmendi
Maitiro ekubudirira kugadzira rako rajidhi bhizinesi?
Chii chinonzi EAT uye ungachiite sei mubhizinesi rako?